रिया चक्रवर्तीको वकिलले सुशान्तका फ्यानहरुलाई ‘बोगस्’ भनेपछि फ्यानहरुले पनि दिए यस्तो जवाफ………… – Khabaarpati
रिया चक्रवर्तीको वकिलले सुशान्तका फ्यानहरुलाई ‘बोगस्’ भनेपछि फ्यानहरुले पनि दिए यस्तो जवाफ…………
October 7, 2020 goodmamLeaveaComment on रिया चक्रवर्तीको वकिलले सुशान्तका फ्यानहरुलाई ‘बोगस्’ भनेपछि फ्यानहरुले पनि दिए यस्तो जवाफ…………
एजेन्सी । सुशान्त राजुपत केसमा लगातार केही न केही नयाँ खुलासाहरु भईरहेका छन् । हरेक दिन यो केसमा नयाँनयाँ कुराहरु बाहीरिएका छन् । जेहोस् यसैबीचमा रिया चक्रवर्तीको वकिलले सुशान्तका फ्यानहरुलाई निशानामा राखेर आफ्नो एउटा स्टेटस् पोष्ट गरेका छन् ।
रियाका वकिल सतिश मानसिन्धेले ह्यास्ट्याग सुशान्त फर एसएसआरका सबै अभियन्ताहरुलाई टारगेट गरेर आफ्नो कडा प्रतिकृया दिएका छन् । सिएनएन १८ को एक अन्तरवार्तामा वकिल मानसिन्धेले भनेका छन्,‘सुशान्त सिंह राजपुतको न्यायकोलागी अभियान चलाउने अभियन्ताहरुले लाजले आफ्नो शिर निहुराउनु पर्छ । किनकी सुशान्तले ड्र’गको सेवन गर्छन् भन्ने कुरा बाहीरिएको छ । सुशान्तको पक्षमा क्याम्पियन चलाउनकोलागी उनको परिवार र तथाकथित मिडियाले बनाएको एउटा कथा मात्रै हो । ज जस्ले यो कथामा सहभागीता जनाए ती सबैले लाजले शिर निहुराउनु पदर्छ ।’
यति मात्र नभई रियाका वकिल मानसिन्धेले सुशान्त केसमा अनुसन्धान गरिरहेको सीबीआईको विषयमा आफ्नो राय दिएका छन् । उनले सीबीआईलाई दिएको सुझाव यस्तो छ ।‘सीबीआईलाई एउटा निष्कर्ष आउने मौका दिनु पर्दछ । किनकी सुशान्तको विषयमा चलिरहेको जाँच अन्तिम समयसम्म होस् । जाँचको विधीलाई निष्पक्ष भएर गरिनु पर्छ । तर यस्तो हुन नदिनकोलागी शूरुमै सबै डक्टरहरुलाई बदनाम गर्ने नियतले सीबीआईले काम गरोस् भन्ने फ्यानहरु चाहान्छन् । यस्तो गरिनु विल्कुलै राम्रो होइन । यदि यस्तो हुन्छ भने उनीहरु आफ्नो गलत आरोपहरु लगाई रहन्छन् जस्ले गर्दा जाँच निष्पक्ष हुँदैन ।’
रियाका वकिलले यसरी आफ्ना विचार राख्न नपाउँदै सुशान्तका फ्यानहरुले उनलाई नराम्रोसंग गाली गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सुशान्तका फ्यानहरुले उनलाई रियाको बचाउ गर्न अब कुनै हालतमा जरुरी नभएको बताएका छन् । केहीले त उनलाई वकिल पेशा छाडेर आफ्नो पुर्खेउली गाउँमा गएर किसान बन्न सुझाव समेत दिएका छन् । भने कतिले उनलाई नम्बर वान वकिल भनेर चिनिएकोले रियालाई जेल जानबाट बचाउन नसकेको भन्दै हिन्दुस्तानमै सबैभन्दा फल्प वकिलको उपाधि पनि दिएका छन् ।
बाबुरामको प्रश्न : प्रदेशको नाम जाति, भाषाकाे पहिचानमा राख्न नहुने ? यो कहाँको संघीयता हो ?
विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेका युवा ७ महिनासम्म कोमामा थिए, होस आउनासाथ पक्राउ…यस्तो छ कारण
छोरी अब मेरो मृ’त्यु छिटो हुदै छ भन्दै बाबुले गरे अन्तिममा १६ महिनाकी छोरीको विवाह, भावुक बनाउने (९ तस्विर) March 6, 2021
९ वर्ष अघि बुहारी बनेर भित्रिएकी थिइन्, पेट दुखेर अस्पताल जाँदा खुल्यो उनी त पुरुष रैछन्, चिकित्सक पनि चकित् March 6, 2021
प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको टेलिभिजनमा समाचार वाचिका त्यतिबेला आश्चर्यमा परिन्, जतिबेला आफ्नै नाम समाचारमा आयो ! March 6, 2021
४० रुपैयाको टिकटले सडक मजदुर बने एकैपटक लखपति, प्रहरीले दियो सुरक्षा March 6, 2021
पायल्सको समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् मुक्ति March 6, 2021